That's so good, right?: ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်မည့်အဖွဲ့အစည်းများ ~~~~~
ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်မည့်အဖွဲ့အစည်းများ ~~~~~
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ဒေသအနှံ့ရှိ ရေကြီးမှုဘေးဒဏ်ခံစားနေရကြရသည့် ပြည်သူလူထုတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီများ သွားရောက်ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် သံဃာတော်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေအပါအ၀င် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက
အလှူငွေတွေ ကောက်ခံလျက်ရှိပါတယ်။ တတတ်တအား ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းလိုသူတွေ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ အဖွဲ့အစည်းတချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) + နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
အမှတ် (၁၃/က) ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မြို့။
လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းပြီးပါကအလှူခံဌာနဖုန်းနံပါတ်-09421011915 သို့ဆက်သွယ်၍ အလှူရှင်အ မည် အားအကြောင်းကြားပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါ သည်။အလှူရှင်အမည်များအားနာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်)အလှူရှင်များFacebookသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Account Name : Free Funeral Service Society (Yangon)
Bank Account No : FDF 140003
Bank Account Currency : US Dollar
Swift Code : MMMYXXX
Bank Phone : 95-1-371013, 95-1-256871
အခန်း ၀၀၄-၀၀၆ ၊ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်
၃၇ ကမ္ဘာဘေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကုန်၊
ဖုန်း 09-420067984, 09-254389959, 09-250807055
09 422 446 052 ၊ 09 254 389 959
Bank Name – Oversea Chinese Banking Corporation Limited (OCBC)
Bank Address – 63 Chulia Street, OCBC Centre East, Singapore
Account Name – ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK LIMITED (AGD Bank)
Account No.(USD) – 503-132-110-301
Beneficiary’s Bank details in AGD Bank (USD) (Sule Branch)
Bank Name – ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK LIMITED (AGD Bank)
Bank Address – Sule Pagoda Road, Yangon
Account Name – Daw Khin Kyi Foundation
Account No. (USD) – 203216000000022
Daw Khin Kyi Foundation’s Saving Account
Bank Name – CO-OPERATIVE BANK LIMITED (CB Bank)
Bank Address – Sayarsan Road, Yangon
Account No. (Kyat) – 0016600300000345
OCBC ဘဏ်မှာဖွင့်ထားတဲ့AGDဘဏ်A/C မှတဆင့်လွှဲပို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။503-132-110- 301 မှာOCBCဘဏ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောAGD ၏ဘဏ်စာရင်းဖြစ်ပါသည်။
reason of payment နေရာတွင် payment of flood donation for Daw Khin Kyi Foundation ဟုဖေါ်ပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိAGD တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော foundation a/c ၏ ဘဏ်စာရင်းကိုငွေလွှဲform တွင်ဖေါ်ပြပြီးငွေလွှဲနိုင်ပါသည်
(3) ၈၈မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့ အစည်း)
အမှတ်-၀၀၅၊ တိုက်(က-၁)၊ ဇာလီတောင်အိမ်ယာ၊ သုမင်္ဂလာ
လမ်း၊ကျိုက္ကစံအနောက် ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန် ။
ဖုန်း ၀၉၇၃၀၈၁၇၀၁၊ ၀၉၇၃၁၂၁၀၂၃၊ ၀၉၂၅၄၈၈၁၉၈၈၊
‪#‎Bank Account No : YOMA.027-35-500056-2
(4) သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်
စစ်ကိုင်း- ဖုန်း ၀၇၂- ၂၁၆၁၁ ၊ ၀၇၂-၂၂၁၆၅
ရန်ကုန်- အမှတ် ၁၀ ပင်လုံလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ ၀၁ -၅၈၁ ၇၇၇၊ ၀၁ ၅၈၁ ၈၈၈ ၊ ၅၈၁ ၅၈၂
ပင်ရွှေညောင်လမ်း၊ တာမွေကလေးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် ရန်ကုန်
(၁) ဦးကုမာရ (ခ) ဦးဇင်း ဘီလူး (နာယက) ဖုန်း – ၀၉၄၅၁၀၀၉၉၉၉
(၂) ကိုသန်းဆွေ (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) ဖုန်း – ၀၉၅၀၃၄၇၈၀
(၃) ကိုမြင့်မောင်ဌေး (ဥပဒေအကြံပြု) ဖုန်း – ၀၉၄၂၀၀၆၁၈၁၉
CB Bank. (Checking Account)
Ashin Kumara (Alodawpyei)
Swift Code- CPOBMMMY
A/C No: 0010101200014998
မင်းပြား ရခိုင်လူမှုကွန်ရက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ဇော်ဝင်း ၀၉၄၂၁၇၅၅၈၉၃ ၊ ၀၉၂၆၁၁၅၂၂၂၉
မြောက်ဦးအသင်းး ဦးအေးမောင် ၀၉၂၅၃၅၅၈၆၅၄
ဦးရွှေတင် မြောက်ဦး နာရေးဥက္ကဋ္ဌ ၀၉၂၅၀၂၄၁၈၈၃
ဦးမောင်သန်း မြောက်ဦးနာရေး ၀၉၂၅၀၈၃၀၄၇၈
~ ရခိုင်ရေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် မေတ္တာမျှဝေလူငယ်များလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ – ၀၉ ၂၅၀၁၀ ၄၅၄၄ ၊ ၀၉ ၂၆ ၁၁၁ ၉၉၂၁ ၊ ၀၉ ၇၃၀၀ ၆၄၇၁
~ ရခိုင်လူငယ်များအဖွဲ့ (Arakan Youths Organization)
ရုံးဖုန်း – ၀၉ ၄၂၀ ၇၅၂၈၇၁
ကိုကျော်မင်း – ၀၉ ၄၂၀၀၀ ၇၈၂
ကိုညီညီမောင် – ၀၉ ၅၀ ၇၈၃၄၁
ကိုရဲမင်းဦး – ၀၉ ၄၅၀၀ ၃၄၂၃၁
ကိုသန်းကြည် – ၀၉ ၇၉၉ ၄၉၂ ၄၃၉
မခင်နှင်းကြည်သာ – ၀၉ ၂၆၁၈ ၂၅၉၉၂ ၊ ၀၉ ၂၅၆၁ ၈၄၅၆၆
ဘဏ်သို့တိုက်ရိုက်လွှဲလိုသူများအနေဖြင့် MPU Card Account Name – Khin Hnin Kyi Thar Card Account No. 999 307 999 1577 4401 – KBZ သို့ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း
ဖုန်း – ဝ၉ ၉၇၇ ၁၁ ၅၅၈၀၊ ဝ၉ ၄၃၀၈၃၈၆၃
ငွေစာရင်းအမှတ်၊ ဝ၂၇၀ ၁၂၁ ဝ၀ဝ၀ ၈၄၆၃ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ငွေစာရင်းအမှတ်၊ ဝ၂၇၀ ၁၀၁ ဝ၀ဝ၀ ၂၇၇၁ (မြန်မာကျပ်ငွေ)
ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အရင်းအမြစ်စုစည်းအသုံးချရေးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း
ဖုန်း – ဝ၉ ၉၇၇ ၁၁ ၅၅၅၅၊ ဝ၉ ၈၆၁ ဝ၂၆၂
အမှတ် ၄၂၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊၊
ဖုန်း – ဝ၁ ၃၉၂၀၂၈၊ ၃၉၂၀၂၉၊ ၃၉၂၀၃၀
(8) နန်းခင်ဇေယျာ (Miss Myanmar International )
Bank account – 0291 220 027 632 (KBZ Bank)
Phone no. – 09782559575 သို့ Viber message ပို့ပြီး အလှူရှင်အမည် နဲ့ လှူဒါန်းမှုအတွက် သတင်းပေးပို့ပေးစေလိုပါတယ်။
ရန်ကုန်မှ အလှူရှင်များ အဝတ်အထည်၊ ဆေးဝါး၊ စားစရာနှင့် အလှူငွေ လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ပါ လိပ်စာသို့ မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ အချိန်အတွင်း လာရောက်ပေးပို့ လှူဒါန်းပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အမှတ် ၁၃၉ မြေညီထပ် ၊ ဗဟိုလမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ (တြိရတနာဆေးခန်းဘေး)
ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် (အနာဂတ်အလင်းတန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်း)၊ Air KBZ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးပို့ရေးဗဟိုဌာနများကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်၊ ကမာရွတ်ဘဏ်ခွဲ (၂)
အမှတ် (၆၁၇)၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
၀၉-၄၃၁၉၆၂၂၅၊ ၀၉-၅၀၀၀၁၇၀၊ ၀၉-၅၁၄၆၉၀၀၊ ၀၉-၃၃၉၀၁၃၇၅
ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက်ဘဏ်ခွဲ (၄) အပေါ်ထပ်
အမှတ် ၂၃ (ခ)၊ ၇၈-လမ်းမကြီး၊ ၄၂-လမ်း အရှေ့ထိပ်၊ ၊ ချမ်းမြသာစည်မြောက်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊
ဖုန်း/ဖက်စ် ၀၂-၆၉၄၀၂၊ ၀၂-၇၁၂၇၁၊
ရေဘေးသင့်ဒေသများတွင် ဆန်ဈေးအဆမတန်မကြီးမြင့်စေရန်နှင့် ဆန်ပြတ်လပ်မှု မဖြစ်ပေါ် စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ ဆန်လိုအပ်သူများ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
၀၁- ၂၁၈ ၂၆၆၊ ၂၁၈ ၂၆၇၊ ၂၁၈ ၂၆၈
-မန္တလေးနှင့် ပုသိမ် တွင်ရေဘေးအလှူအတွက် ဆန်ဝယ်လို ပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ရဲမာန်သစ္စာ ၀၉၅၁၀၆၂၈၅၊ ၀၉၂၀၀၅၈၇၂
- မိုးပုလဲ ၀၂၇၃၈၇၁၊၀၉၄၃၀၅၉၉၂၅၊၀၉၂၀၀၉၉၄၃
- ရတနာ ၀၂၇၀၇၀၉၊၀၂၇၀၆၀၀၊၀၉၇၉၀၇၇၈၈၉၀၊
- ဦးမောင်မောင်ဇော် (ပုသိမ်) ၀၉၅၂၀၁၅၁၅
မြန်မာရေဘေးသတင်းအချက်အလက် ၀က်ဆိုက်အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://www.myanmarflood.info/ တွင်ဖော်ပြထားသည့် ရေဘေး ကူညီပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
‪#‎SaveMyanmar ‪#‎SupportMyanmar ‪#‎DonateBurma